April 2019 - Boga Wise Man
Siyaasi Dantayda Ka Hadal
Akhriste is weydii. Waa maxay dantaadu? Dantaadu waa adoo hela nolol sharaf leh oo xornimo ku nool gaar ahaan ku hela wadankaaga. Dantaadu waa adoo wadankaaga ku haysta shaqo ama ganacsi noloshaada iyo ta reerkaagaba ku filan. Dantaadu waa adoo wadankaaga ku haysta adeegyo caafimaad oo heersare ah oo bilaash ah. Dantaadu waa adoo wadankaaga […]
10-ka Wadan ee Dumarkooda La Isku Raacay.
Rag badan oonu asxaab nahay ayaa waxay talo iga weydiiyeen dumarka jinsiyadaha dumarkoodu fiican yihiin. Maadaama gabdhihii Soomaaliyeed ajaanibkii jeclaadeen oo ragii Soomaaliyeed ka jeesteen, niman badan oo Soomaali ah waxay imika iyaguna rabaan inay dunida u dumar doontaan. Weliba waxay aaminsan yihiin in dumarka Soomaaliyeed ee nimanka madaw uun dhaafi waayay ay iyagu ka […]
Siyaasada iyo Runta
Runta ama daacadnimadu waa siyaasada ugu wacan adduunka. Qofka run-sheega ahna waynu wada ognahay halka uu ka taagan yahay Illaahay. Diinteena suuban ayaaba ku dhisan inaad ka run-sheegtid oo qirtid jiritaanka Illaahay (Subxaanuhu Watacaalaa). Dhanka kale been sheegidu ma aha siyaasad iyo fariidnimo ee waa khiyaamo iyo fulaynimo. Qofka siyaasiga ahna ama siyaasiga raba inuu […]
Qaab Dhismeedka Qasriga Cusub ee Somaliland
Samaynta rugta fadhiga dawlada ee qaranka ama qasri madaxtooyo waa arrin muhiimad weyn u lahayn wadankeena. Qasriyadu waa astaan qaran. Waa guri lagu hirto. Waa dhisme laga dheehdo dhaqanka iyo suugaanta dadka qasriga leh. Dhanka kale qasrigu waa dhisme loogu talogalay inuu fududeeyo maamulka iyo maaraynta shaqada maalinlaha ah ee madaxweynaha ama hogaamiyaha bulshada. Taariikhda […]
Suudaan – Is bedelada Maanta
Is bedelada loogu yeedho ” Guga Carabta” waxay isugu jiraan qaar dadku iskood u keceen iyo qaar gacmo dheeraad ahi kiciyeen. Tusaale ahaan kacdoonadii ka dhacay Tuuniisiya iyo Masar waxay ahaayeen qaar dhab ah oo shacabku ka dhiidhiyeen keligii taliyeyaashii horjoogay. Balse kacdoonka kadib taladii wadamadaa waxaa dib loogu celiyey maamulo kii ay eryeen aan […]
Sirta Horumarka – Guud Mar
Sagal waxay kusoo lebisatay dhar cad Ayaana dhar cas. Markay hablihii soo gaadheen miiskii Timo iyo C/risaaq, ayay labadii nin u istaageen. Bariido gacanta ah ayaa la is weydaarsaday iyadoo la dhoola cadeynayana waa la fadhiistay miiskii. Waa isla miiskii uu fadhiyey C/risaaq maalintii uu arkay Sagal. Axmed Timo ayaa markiiba fududeeyey in sheekadu bilaabanto […]